★မြန်မာ့အလင်း★: ကွဲစရာအရှက်၊ ကျစရာသိက္ခာမရှိတဲ့ ကျွန်ကုလား (၅)
ကျွန်ကုလားဆိုတာ တကယ်ကို အရှက်လုံးဝမရှိ။ သိက္ခာလည်း တပြားသားမှ မရှိ။ သူတို့မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတဲ့ သမိုင်းပြန်ကြည့်ရင် အာရပ်တွေက သူတို့တွေကို စစ်တိုက်တယ်။ သူတို့ အဖွားကို လူပုံအလယ်မှာ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ဆာလီကြီးကို လှန်တယ်။ စဉ်စားကြည့်ပေါ့ဗျာ… ကျွန်ကုလားမ မဲမဲကြီး နေပူကျဲကျဲထဲမှာ ချွေးတွေကလဲထွက်နေမှာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆာလီကြီးလှန်ခံရလို့ စအိုမဲမဲတူးတူးကြီးဟာ ချွေးတွေအပြည့်နဲ့ ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ အနံ့အသက်ကတော့ တော်တော်ကိုဆိုးမှာပဲ။ ပြောရင်းတောင် အန်ချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါကို မရွံမရှာနဲ့ အာရပ်တွေက စုပြီး အနံ့ဆိုးရွားလှတဲ့ စအိုမဲမဲတူးတူးကြီးကို မုဒိမ်းကျင့်တာဗျ။ အဲလို စအိုကိုမုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့နေ့က စပြီး ကုလားတွေဟာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်လာတာပါ။ ကုလားရာဇ၀င်က အဲဒါပဲ... ဒါတောင် ကုလားတွေက မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုပဲဗျာ။ အသီးမှာသရက်.. အသားမှာဝက်.. အရွက်မှာ လက်ဖက်.. ကျွန်မှာကုလားဆိုတဲ့ မြန်မာ့ရှေးလူကြီးတွေ ပြောဆိုချက်ကတော့ အရမ်းကို မှန်တယ်နော်။
တကယ်တော့ အသားမည်းတာဟာ အားနည်းချက်မဟုတ် သလိုပဲ ဘာမှလဲ မထူးခြားပါဘူး။ (ကုလားကို လူမျိုးရေးအရ နှိပ်ကွပ်ဖို့ မစဉ်းစားပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမနဲ့လည်း မညီညွတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့မြေပေါ်မှာနေပြီး မြန်မာကို စော်ကားရင်တော့ သည်းခံမှာမဟုတ်ဘူး။ မော်ပြီးတောင်မကြည့်ရဲအောင် လုပ်ပစ်မယ်.. ရှင်းတယ်နော်?) မဲမဲတူးတူးနံနံစော်စော် စအိုကြီးကို မရွံပဲ မုဒိမ်းကျင့်နိုင်တဲ့ အာရပ်တွေကသာထူးခြားတာပါ။ ကျွန်ကုလားတွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ quran ထဲမှာ အသားမည်းသူတွေကို နှိမ်ချရေးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကုလားလို့အခေါ်မခံပဲ မွတ်ဆလင်လို့ပဲ ခေါ်ခံချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကုလားတွေကို ဂုဏ်ငယ်အောင် လုပ်တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ… သူတို့ အဖွားစအိုကို မုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ရာဇ၀င်. . . အသားမည်းတွေကို နှိမ်ချတဲ့ Quran ကျမ်းယုတ်.. စတာတွေကို လုံးဝ စိတ်မနာဘူးတဲ့။ အဲလောက်အထိ ကျွန်ကုလားတွေက သခင်အာရပ်တွေအပေါ် ချစ်တာဗျ။
အခုဗီဒီယိုမှာတော့ ကျွန်ကုလားတွေ သိပ်ပြီးလေးစားတဲ့ Yusuf Estes ဆိုတဲ့ ပလီဆရာဟာ လုံးဝမအရှက်မရှိပဲ ဗြောင်လိမ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ ကျုပ်တို့လို ၀ါဒမတူတဲ့သူတွေကိုမပြောနဲ့.. သူတို့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းကို ဗြောင်လိမ်နေတာ ပလီဆရာတွေပဲ။ အဲဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် Aisha ကို မိုဟာမက်လက်ထပ်တဲ့ အသက်ဟာ ၆ နှစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ၉ နှစ်ဆိုပဲ။ လူတွေက လိမ်လို့ ဂဏန်း9ကို စောက်ထိုးလုပ်ပြီ6းဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာတဲ့။ ဟားဟား...။ ဟားဟား.. မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီမိုဟာမက်ကိုတော့ မကိုးကွယ်ပဲမနေနိုင်။ ခက်တာက အဲဒီမိုဟာမက်ကြီးဟာ အဆင့်လုံးဝမရှိတဲ့ အောက်တန်းစားဆိုတာလဲ သိနေတယ်။ ရယ်စရာလဲကောင်း . . . သနားဖို့ကောင်းတာကတော့ . . . . အချင်းချင်းလိမ်ပြီး စိတ်ဖြေနေကြရတယ်ဗျာ။ ကြာကူလီကောင်ကြီးလက်ထပ်တာ ၉ နှစ်တဲ့.. ၀ါးဟားဟား။ ဟဲဟဲ.. ကုလားကို ခရစ်ယာန်က ဘယ်လိုနှိပ်ကွပ်ထားလဲ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါဦးဗျာ။ ၀ါးဟားဟား .. ကုလားတွေရေ..မင်းတို့တွေမှာ ကွဲစရာအရှက်မရှိတာ အရမ်းကံကောင်းပါတယ်ကွာ... ၀ါးဟားဟား။